Ahoana ny momba ny headphones Bluetooth sasany amin'ny iPhone 7 manaraka? | Vaovao IPhone
Toa efa nomena izany fa ny iPhone 7 manaraka dia tsy hanana palitao finday. Ny voalohany dia tsy inona fa ny tsaho mampidi-doza, ankehitriny dia toa voamarina amin'ny loharanom-baovao samihafa manome toky ny zava-misy toy izany. Na izany aza, ireo izay nahita fahasahiranana lehibe dia mety hiafara amin'ny fijerena azy tsara fotsiny, satria Tsaho vaovao iray no miantoka fa afaka mampiditra headset Bluetooth isaky ny iPhone 7 novidianay i Apple.
Voalohany dia nolazaina fa noho ny antony mahafinaritra no ahafahana manamboatra ny iPhone manify. Taorian'izay dia nisy ny fanombantombanana momba ny fananganana endrika mozika HD vaovao ho an'ny Apple Music izay mitaky mpampitohy nomerika hahafahana mankafy ny kalitaon'ny mozika rehetra amin'ny iPhone, ary taorian'izany dia tonga ny "fanamafisana" avy amin'ny loharanom-baovao avy ao anaty ireo orinasa any Sina izay nanome toky fa tsy hanana ilay mpampitohy jack malaza ireo iPhones vaovao. Toa mifanentana ireo sombin-javatra ireo ary afaka mandray dingana mampidi-doza i Apple amin'ny alàlan'ny fanesorana ny kapila an-telefaona amin'ireo fitaovana vaovaony, manomboka amin'ny iPhone 7.. Tsy zavatra tokony hahagaga antsika ihany koa izany, satria tamin'ny fotoana nametrahany ny drive optique koa tao amin'ny solosaina findainy ary taty aoriana tao amin'ny latabatra misy azy, izay niteraka resabe, ary tamin'ity taona lasa ity dia nandefa MacBook vaovao niaraka tamin'ny fifandraisana USB-C tokana., fanapahan-kevitra mbola eo am-pelatanana.
Fa ahoana raha nanapa-kevitra ny hampiditra headset Bluetooth ao anaty boaty iPhone i Apple? Toa izany no nipoiran'ny loharano vaovao akaikin'ny mpamatsy Apple. Apple dia afaka manolotra kinova tsy misy tariby amin'ny EarPods, na ny tsara kokoa, manolotra ny PowerBeats 2 (izay tsy misy dikany ary mety tonga lafatra) ho an'ireo mpividy ny iPhone vaovao. Aza adino fa an'i Beats i Apple ary ny orinasa dia efa nanamafy tamin'ny fotoana maromaro izay lavitra ny fanovana ny marika ho an'ny paoma dia hitohy miaraka aminy. Ahoana raha izany no izy, dia tsy ho olana be loatra ny tsy fananana «headphone jack»? Ity tsaho ity dia tsy maintsy harahina tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ahoana ny momba ny headphones Bluetooth sasany amin'ny iPhone 7 manaraka?
David Lopez del Campo dia hoy izy:
Ary daka amin'ny baoritra amin'ilay nilaza fa hanala ny jack headphone, ahoana ilay iPhone 7 vaovao?
Valiny tamin'i David Lopez del Campo
Manantena aho, saingy azo antoka fa miaraka amina fiakarana 50 € ho an'ny tarehy izany.
Rafael pazos dia hoy izy:
Tena…? TENA…? Fa raha 200 dolara ny vidiny ... ary inona koa, manana QY8 tsy misy tariby aho izay maharitra 7 ora ny fahaleovan-tena ary mitovy amin'ny tabataba ihany koa, manana izany aho, mpinamana iray izay mpankafy kapoka izay nividy ny vokatra mitempo rehetra mandra-pahatongan'ny farany izay nivoaka, ary nanome ahy ny antony ... ny QY8 dia mitovy amin'ny gadona ... raha manome azy ireo tsara izy ireo nefa tsy mampiakatra ny vidin'ny iPhone ho an'ny headphone ...
Miarahaba sy mamihina!
Valio Rafael pazos
Valencell dia miampanga an'i Apple ho nangalatra ny teknolojia fitepon'ny fony
Fizahana mpiaro ny efijery GPEL (SWEEPSTAKES)